နှစ်ပေါင်း ၃၀၀ အကြာမှာ ဖူဂျီတောင်ပေါက်ကွဲတော့မှာလား? - JAPO Japanese News
ကြာ 23 Sep 2021, 9:30 မနက်
စာဖတ်သူများ သိကြတဲ့အတိုင်း ဂျပန်နိုင်ငံမှာ အကြီးဆုံးတောင်ကတော့ ဖူဂျီတောင်ဖြစ်ပါတယ်။
တောင်အမြင့်ထက် တောင်ပုံသဏ္ဍာန်ရဲ့ အလှကြောင့် ကမ္ဘာတစ်လွှားက လူတွေကို ဆွဲဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
ဟိမဝန္တာတောင်တန်းတွေနဲ့ ယှဥ်ကြည့်ရင်တော့ ဖူဂျီတောင်ဟာ အတော်လေးသေးငယ်တဲ့တောင်ဖြစ်ပေမယ့် ချော်ရည်စီးကျရာမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်ကြောင့် အလွန်လှပပါတယ်။
ဟိမဝန္တာတောင်တန်းဟာ တိုက်ကြီးတွေ ရွေ့လျားတိုက်မိမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဖူဂျီတောင်ကတော့ မီးတောင်ပေါက်ကွဲရာကနေ ဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။
ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပေါ်ပြီး ချော်ရည်တွေ စီးကျလာရာကနေ အေးခဲကာ တောင်အသွင်ဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီတောင်မှာပဲ ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပေါ်လိုက် ချော်ရည်တွေစီးကျလိုက်ဖြစ်ရာကနေ အခု ဖူဂျီတောင်ဖြစ်လာပါတယ်။
ပြီးတော့ ချောမွေ့တဲ့ဆင်ခြေလျှောလေးဟာ လှလှပပလေး ကျန်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီဖူဂျီတောင်ဟာ နှစ်ပေါင်း ၃၀၀ လောက် ပေါက်ကွဲမှုမဖြစ်ပွားခဲ့ပါဘူး။
ဒီကြားထဲမှာတော့ အသေးစားပေါက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပေမယ့် နှစ်ပေါင်း ၃၀၀ ကြာအောင် ပေါက်ကွဲမှုကြီးမဖြစ်ပေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့် တစ်နေ့နေ့တော့ ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်မှာဖြစ်ပေမယ့် ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှာ လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလျင်ကြီးကြောင့် ဖူဂျီတောင်မှာ တစ်ခုခု မူမမှန်မှုတွေ ဖြစ်နေတဲ့ပုံပါပဲ။
မီးတောင်အောက်မှာ ချော်ရည်တွေ စုဝေးနေတဲ့ Magma chamber ဆိုတာ ရှိပါတယ်။
အဲ့ဒီနေရာမှာ ချော်ရည်တွေ အတော်များများနေပြီဆိုရင် မျက်နှာပြင်မှာရှိတဲ့ကျောက်ကို ဖောက်ထွက်ပြီး ချော်ရည်တွေက အပေါ်တက်လာကာ ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်စေပါတယ်။
၂၀၁၁ ခုနှစ် ငလျင်လှုပ်ရှားပြီး ၄ ရက်အကြာမှာ ငလျင်ကြောင့် Magma chamber ရဲ့ မျက်နှာပြင်မှာ အက်ကွဲကြောင်းတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ၂၀၂၁ ခုနှစ်ဟာ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက မီးတောင်တွေ ပေါက်ကွဲတဲ့နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။
ချော်ရည်တွေရဲ့ လှုပ်ရှားမှုဟာ တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ လှုပ်ရှားနေတဲ့အတွက် ဖူဂျီတောင်ရဲ့ ချော်ရည်ဟာလည်းပဲ သေချာပေါက် လှုပ်ရှားနေမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပြင်းအားများတဲ့ ငလျင်သာ နောက်တစ်ခေါက်လှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်တော့ ဖူဂျီတောင်ဟာ ချက်ချင်း မပေါက်ကွဲနိုင်ဘူးလို့ မဆိုနိုင်ပါဘူး။
ဒါဆိုရင် ဖူဂျီတောင် ပေါက်ကွဲခဲ့ရင် ဘာဖြစ်နိုင်သလဲ?
ချော်ရည်ပေါက်ကွဲတဲ့အရှိန်ဟာ ပြင်းတဲ့အတွက် ကျောက်တုံးကြီးတွေကိုတောင် မှုတ်ထုတ်နိုင်ပါတယ်။
ပုံမှာပြထားသလို ကျောက်တုံးတွေကတော့ အဝေးကြီး လွင့်ပျံမသွားပေမယ့် ၂၀ စင်တီမီလောက်ရှိတဲ့ ကျောက်တုံးကတော့ ၁၀ ကီလိုမီတာအထိ လွင့်ပျံနိုင်ခြေရှိပါတယ်။
အပူချိန်မြင့်တဲ့ မီးတောင်ပြာ၊ ကျောက်တုံးစီးကြောင်းဟာလည်း အရှိန်မြန်လာပါတယ်။
ချော်ရည်ထက်ကြောက်စရာကောင်းတာက ဒီမီးတောင်ပြာ၊ ကျောက်တုံးစီးကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။
အပူချိန်မြင့်ဓာတ်ငွေ့ဟာ တစ်နာရီလျှင် ၁၀၀ ကီလိုမီတာနှုန်းနဲ့ တောင်ခြေကို တိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။
ဒီစီးကြောင်းမှာဆိုရင် အဆောက်အအုံအားလုံး ပျက်စီးပြီး လူသားတွေပါ ညှပ်ပါသွားမယ်ဆိုရင်တောင် မကယ်နိုင်ပါဘူး။
နောက်ပိုင်းမှာ စီးကျလာတာကတော့ ချော်ရည်ဖြစ်ပါတယ်။
၁၂၀၀ ဒီဂရီအထိ မြင့်တက်နိုင်တဲ့ အပူချိန်ဟာ ကြောက်စရာကောင်းပေမယ့် အရှိန်က လူတစ်ယောက်ပုံမှန်လမ်းလျှောက်နှုန်းပဲဖြစ်တဲ့အတွက် လူတွေပါ ချော်ရည်ထဲ မျှောပါလေ့မရှိပါဘူး။
ဒါပေမယ့် လမ်းတစ်လျှောက်က အဆောက်အအုံတွေကိုတော့ မီးရှို့သွားပါလိမ့်မယ်။
ဒါပေမယ့် ဖူဂျီတောင်ခြေမှာ လူတွေနေတဲ့နေရာတွေ သိပ်မရှိတာမို့လို့ အပေါ်က ပြဿနာတွေက လူသားတွေအတွက်တော့ သိပ်အန္တရာယ်မဖြစ်စေနိုင်ပါဘူး။
ပြာဟာ ပေါ့ပါးပြီး သေးငယ်တဲ့အတွက် လေနဲ့ ဝေးလံတဲ့နေရာအထိ ရောက်နိုင်ပါတယ်။
လယ်ကွင်းနဲ့ စပါးခင်းပေါ်ကို ကျသွားတဲ့ပြာတွေဟာ အရွက်ကို နေရောင်ခြည်နဲ့ ထိတွေ့မှုကနေ တားဆီးပြီး ကြီးထွားမှုကို ဆုတ်ယုတ်စေပါတယ်။
တစ်ချို့အလွန်သေးတဲ့ပြာတွေဟာ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းထဲကို ဝင်ရောက်တဲ့အတွက် စက်လုပ်ဆောင်ချက်မကောင်းမွန်မှုနဲ့ ချို့ယွင်းမှုတွေကို ဖြစ်ပွားစေနိုင်ပါတယ်။
အဆောက်အအုံတွေအပေါ်မှာ ကျရင်လည်း ပြာတွေက ပေါ့ပါးတဲ့အတွက် ဒီအထိတော့ ပြဿနာမရှိပေမယ့် မိုးရွာရင်တော့ အဆင်မပြေလှပါဘူး။
မိုးထိထားတဲ့ပြာတွေက လေးလံလာနိုင်တဲ့အတွက် ခိုင်မာမှုအားနည်းတဲ့အဆောက်အအုံတွေကို ပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်။
လေယာဥ်ပျံရဲ့ အင်ဂျင်ထဲကို ဝင်သွားရင် အင်ဂျင်ရပ်သွားပါမယ်။
မီးရထားသံလမ်းပေါ်မှာ ပြာတွေစုပုံနေရင်လည်း အန္တရာယ်ရှိပါတယ်။
ရေပေးဝေးမှုလိုင်းထဲကို ပြာတွေ စုပုံသွားရင်လည်း ရေပိုက်လိုင်းတွေကို ပိတ်ဆို့စေနိုင်ပါတယ်။
ဒီလိုစိုးရိမ်စရာတွေ ဖြစ်ပွားစေနိုင်တဲ့ မီးတောင်ပြာ ရောက်ရှိနိုင်တဲ့နယ်ပယ်ကျယ်ပြန့်မှုဟာ ကြောက်စရာဖြစ်ပါတယ်။
လေလမ်းကြောင်းပေါ်မူတည်ပြီး အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းအတိုင်း မြို့တစ်မြို့လုံးကို ဖုံးအုပ်သွားနိုင်ပါတယ်။
တိုကျိုမြို့မှာသာ ပြာတွေစုပုံလာရင် ဖြစ်လာမယ့်အခက်အခဲတွေကို ရှောင်ပြေးလို့မရပါဘူး။
သန့်ရှင်းရေးလုပ်လိုက်ရင်ရပြီမဟုတ်လားလို့ဆိုနိုင်ပေမယ့် မီးတောင်က နေ့တိုင်း ပေါက်ကွဲနေမယ်ဆိုရင် ပြာက နေ့တိုင်းကျနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက် သန့်ရှင်းရေးလုပ်လို့ ဆုံးနိုင်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။
ဖူဂျီတောင် ပေါက်ကွဲရင် ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဆိုတာ တကယ်တော့ စာဖတ်သူတို့တွေးနေသလို ချော်ရည်တွေ ဝါးမြိုခံရတာမဟုတ်ဘဲ မီးတောင်ပြာမှုန့်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ရိုးရှင်းပြီး ဒါပေမယ့် နယ်ပယ်ကျယ်ပြန်တဲ့ပျက်စီးမှုဖြစ်ပါတယ်။
ဖူဂျီတောင်က တစ်နေ့နေ့တော့ ပေါက်ကွဲမှာဖြစ်ပေမယ့် ကိုရိုနာကြောင့်
အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ အရင်ဆုံး ဒီအခက်အခဲကနေ ထွက်ပြေးချင်မိပါတယ်။
ဖူဂျီတောင်ပေါက်ကွဲဖို့ countdown လုပ်ရတော့မှာလား? နောက်ဆုံးတော့ သဘာဝဘေးကြီး နီးကပ်လာပြီး။
ဖူဂျီတောင်ကို ဘယ်သူပိုင်တာလဲ ?
(၃) ရက်နေ့ တိုကျိုတွင်ကူးစက်မှုအသစ် ၅၃၃ ဦးရှိကြောင်းအတည်ပြု